Nkọwapụta ihe banyere ọdịdị ala: njirimara na mkpa | Network Meteorology
N'ime sayensị anyị maara dịka geology nwere ngalaba dị iche iche na-eme ka ọmụmụ ihe miri emi nke ụwa anyị mie emie. Otu n’ime alaka ndị a bụ nhazi ala. Ọ bụ ngalaba nke geology nke metụtara njikọ mmụta ala nke metụtara nyocha nke usoro ala, nkume, na geotechnics. Ọ bụ ngalaba sayensị dị oke mkpa gbasara usoro mmụta ala iji nwee ike ịghọta mmalite na nhazi nke nkwụnye ego yana otu esi mepụta usoro ọdịdị ala nke ụwa ugbu a.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara niile na mkpa nke usoro geology.
2 Mkpa nrụgide dị na geology
3 Mkpa nke nrụrụ oke okike na mbara ala
Ọdịdị ihe owuwu ihe owuwu dị ezigbo mkpa na ngalaba nchịkwa obodo ebe ọ bụ ntọala nke ọrụ owuwu maka ụlọ, àkwà mmiri, mmiri ozuzo, okporo ụzọ, wdg. Na Ọ na-eje ozi dị ka ngwá ọrụ maka mgbochi na mgbochi na njikwa nke ihe egwu ụwa.
Geology nke Structural bu nke gunyere usoro na ihe nile metutara ike tectonic di na ala. Anyị na-echeta na efere tectonics tiori na-agwa anyị na ụwa jikọrọ ọnụ mejupụtara tectonic efere na-agafe oge ekele maka convection ugbu a nke uwe elu ụwa.
Ihe owuwu ala na-adabere na nhazi nke ala ma ọ bụ mpaghara ụfọdụ. Nyochaa uplifts nke foliations, ahịrị na ndị ọzọ tectonic ọcha. Ọ na-enyocha nrụrụ dị na teknụzụ tectonic n'ihi nkume ndị dị ugbu a. Ọ nwere ike ịmata usoro tectonic niile dị na ngalaba, ma ọ bụ n'ihi mmejọ ma ọ bụ nkwonkwo, n'etiti ndị ọzọ.
N'ihi usoro ọdịdị ala, enwere ike ịmụta nnukwu ozi gbasara usoro na ihe ndị metụtara ikike tectonic. A na-enyocha usoro ihe omumu ihe nile iji dokwuo anya ihe ike dị iche iche a na-eduzi n'oge akụkọ ala. Nyocha ndị a bara nnukwu uru na sayensị ma nwee ike inyere atụmanya na nyocha aka. Ma ọ bụ na ọtụtụ nkwụnye ego chọrọ ụfọdụ nsonye n'akụkụ nke mpaghara tectonic kpebisiri ike ịmalite.
Geotechnics bụkwa akụkụ dị mkpa na nhazi ala. O sitere na ihe omumu nke nkume. Nke ahụ bụ, ụzọ nke oke nkume si agbaji ma ọ bụ omume nke mgbawa nkume. Njirimara ndị a dị mkpa karịsịa na ebe a na-egwupụta akụ ma ọ bụ ọwara, n'ihi na ọ dị mkpa inwe ọmụmụ ihe zuru ezu banyere ma nkume ahụ ọ nwere ike ịkwado ọrụ ma nọgide na-adịgide adịgide. A gha aghaghi ime omumu iji tulee onodu nke ida.
Mkpa nrụgide dị na geology
Mgbe anyị na-ekwu maka mbọ anyị na-ekwu maka ike a na-etinye n'akụkụ ụfọdụ nke nkume. Ike a nwere ike isi ihe omumu banyere ala mpụga ma ọ bụ tectonic nrụgide. Otu ihe eji arụ ọrụ na ihe ndị a bụ kilogram kwa square centimita.
Dabere na ọdịdị nke nrụgide ndị a na-etinye n'ọrụ, ọ nwere ike ịmata ya na ụdị atọ: mkpakọ, esemokwu na ịkwa osisi.
Mkpakọ: ọ bụ nrụgide nke na-edozi nkume mgbe ọ na-ejikọ ya site na ike ndị a na-eduzi ibe ha n'akụkụ otu ahịrị. Mgbe nke a mere na ndammana, ọ na-eche na ọ ga-ebelata nrụgide site na nhazi dị iche iche ma ọ bụ mmejọ. Nke a dabere na omume nke nkume ahụ, ma ọ bụ nke ọma ma ọ bụ nke na-emebi emebi.
Erughị ala: nsogbu nrụgide bụ nsonaazụ nke ike na-eme otu usoro ahụ mana na ntụgharị ihu. Mgbalị ahụ na-eme na nkume na-agbatị ma kewaa.
Kwa osisi: bụ mgbalị nke na-arụ ọrụ na ntanetị ma na-abụghị akụkụ. Stressdị nchekasị a na-ebute nrụrụ ngbanwe site na ụgbọ elu ndị anya. Ọtụtụ nrụgide nke ịkwa osisi bụ nsonaazụ ala ọma jijiji ozugbo.
Mkpa nke nrụrụ oke okike na mbara ala
Akụkụ ọzọ dị mkpa mgbe ị na-eme nyocha ala bụ mbibi nke nkume. A na-eji ndozi dị ka okwu na-ezo aka na mgbanwe ọ nwere ike ibute ma ọdịdị na olu nke oke okwute. Mgbanwe ndị a na-abịa n'ihi mbọ a na-agba. Site na nchekasị a, nkume nwere ike ịgbaji ma ọ bụ ghọọ ogige.
Mgbanwe nke nkume ga-abụ mgbe ike mgbalị dị ukwuu karịa nguzogide nke nkume ahụ nwere ike inye.
Ọnọdụ na gburugburu ebe e guzobere nkume ahụ dị nnọọ iche. Nke a bụ n'ihi na enwere ike ịchọta ha site na ọkwa elu rue ọbụlagodi 40 kilomita miri emi. Ihe mgbanwe dị iche iche nke na-arụ ọrụ na usoro usoro ala a bụ ọnọdụ nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ nke usoro ndị a na-etolite. Iji ghọta ma kọwaa usoro nhazi nke usoro ọdịdị ala ọ bụla, ọ dị mkpa ka anyị jikọta ya na ọkwa nhazi, ya mere a na-akpọ ya ọdịdị ala.
Ọdịdị nhazi bụ akụkụ ọ bụla nke jikọrọ ọnụ nke usoro nrụrụ nke oke nkume dị otu. Nke ahụ bụ, ọkwa ọkwa bụ nke na-ezo aka na ngalaba dị iche iche nke karịrị ibe ha. Ọ bụrụ na anyị na-atụle elu nke ụwa anyị dị ka njedebe dị elu ma mee ka etiti ụwa bụrụ mpaghara kachasị omimi, enwere usoro nhazi 3.
Ọdịdị elu dị elu: Ọ dị n'elu ala ma na-eje ozi dị ka ntụpọ nwere obere nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ. N'ebe a, nkume nwere agwa ojoo na mmejọ.
Ọkara nhazi usoro: ọ dị na ọkwa oke site na 0 ruo 4.000 mita. Usoro kachasị bụ ịkọ nke nkume n'ihi omume ha ma ọ bụ ductile. Folds bụkwa njirimara.
Nhazi usoro ala: a na-ahụta ya dịka ọkwa metamorphism ma ọ dị n’etiti mita 4.000 na 10.000. Ọnọdụ kachasị elu nke usoro a na-ebute mbadamba nkume na ihu ihu n'ihu nke schistosity. Ka anyị na-abanye miri emi, anyị anaghị ahụ ọtụtụ ihe owuwu na-asọpụta nke nwere folds na schistosity na foliation.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere nhazi ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Nhazi ihe owuwu